Lammummaa Yunayitid Isteetis Kanneen hin Qabaanne Niw Yoork Keessatti Filannoof Sagalee Kennuu Danda’u Jedhame
Muddee 14, 2021
Hiriira Gumii magaalaa New York biratti Kamisa geggeeffame, Mudde 9 2021
Gumiin magaalaa New York kanneen lammii Ameerikaa hin ta’in filannoo bulchiinsa magaalaa keessatti akka hirmaatan gochuuf kamisa darbe sagalee kennee jira. Tarkaanfiin fudhatame kunis jiraattonni magaalattii kanneen 800,000 ta’an hawaasa naannoo isaanii keessatti yeroo jalqabaaf sagalee akka kennan carraa kenneef jedha gabaasi Carolyn Presutti.
Jackelin Godooyee lammumma Yunaayitid Isteetis kan hin qabaanne yoo ta’an, amma filanoo magaalaa New York keessatti geggeessamuuf sagalee kennuuf jiru. Filannoo biyya isaanii kan Venenzuelatti adda jedhan.
Achitti filannoon wal dha’uun waanuma beekamaa dha. Kanaaf, asitti hamma tokko mirkanuu qabda. Sagaleen kee akka laka’amuu danda’u illee mirkaneeffachuu dandeessa jedhan.
Kamisa darbe, gumiin magaalaa New York seera namoota kuma dhibba saddeet ol ta’aniif mirga filaachuu kennu raggaasise. Kunis kanneen eeyama hojii qaban, green card ykkn eeyama jireenyaa qaban, kanneen dreamers” jedhamanii fi ijoollummaatti gara Yunaayitid Isteetisitti fidamanii fi namoota lammii hin taane kan seraan as jiraatan ofitti haammata.